Factory Tour - Scaffolding haingana (injeniera) Co., Ltd.
Ny scaffolding haingana dia nandroso fitaovana mandeha ho azy, izay afaka manome famokarana namboarina ho an'ny scaffolding mba hihaona amin'ny filàna samihafa amin'ny traikefa an-taonany.
Ny scaffolding haingana dia afaka manome famokarana namboarina manokana avy amin'ny traikefa an-taonany sy ny karazana fitantanana mandeha ho azy sy nomerika ERP.
Ny scaffolding haingana dia nandalo ny mari-pahaizana momba ny Production Production Standard, ary miasa mafy ISO9001: rafitra kalitao 2008, Rafitra fitantanana tontolo iainana ISO14001 SY OHSAS18001 rafitra fitantanana fiarovana ara-pahasalamana. Manana ny fahaizan'ny famokarana mandroso sy ny fitaovana famokarana feno izy io. Ny milina famafazana feno sy ny sandan'ny welding robot dia manatsara ny famokarana sy ny fanamboarana ny vokatra, ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta ary ny kalitaon'ny vokatra.
Sakan-tsarety haingana dia nanorina fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'ny University South East ary nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa maharitra; Ny orinasa koa dia miara-miasa amin'ny oniversite Shanghai Jiao Tong, mahatsapa ny famokarana mandeha ho azy amin'ny haitao tena.
Ny Rapid Scaffolding dia afaka manome safidy kendrena hamaly ny filàna isan-karazany amin'ny indostria samihafa.
Vokatra Scaffolding haingana nankatoavin'ny EN 12811-1: fenitra 2003, ary CE, SGS, ANSI10.8, fanamarinana AS / NZS 1576.3, mpikambana ao amin'ny SAIA izahay. Ny Scaffolding haingana dia mandray an-tanana ireo karazana fikolokoloana sy famolavolana santionany, drafitra ary famokarana manerantany.
Rapid Scaffolding dia manana fahaiza-manao famokarana tsy miankina, mitarika andalana famokarana mandeha ho azy sy fahaiza-manao famokarana avo izay afaka mamaly tetikasa maro napetraka.